Rahoviana no mendrika $ 100 tapitrisa ny SEO? | Martech Zone
Rahoviana no mendrika $ 100 tapitrisa ny SEO?
Talata, Jolay 20, 2010 Alahady Oktobra 30, 2011 Douglas Karr
Hatramin'izao, tsy azoko antoka fa nahita whitepaper antsipiriany bebe kokoa amin'ny fandrefesana ny sandan'ny fanatsarana ny motera fikarohana mandra-pamakiako ity Whitepaper ity, Ahoana no manome lanja ny SEO. Misy tranokala sasany namorona rindrambaiko fotsy mitovy amin'izany, saingy ity no vao hitako nanazava azy ho an'ny olona manana MBA hahatakatra tsara.
Ny antontan-taratasy dia mandeha amin'ny mpamaky rehetra, amin'ny alàlan'ny fampiasana takelaka sy fitaovana maimaimpoana azo avy amin'ny Google, handinihana sy hikajiana ny sandan'ny fahazoana laharana. Anisan'ireo loko fotsy:
fianarana mandanjalanja SEO amin'ny maha-Comp analysis
Isan-taona Ny lanjan'ny laharana Google Laharana voalohany
Isan-taona Ny sandan'ny laharana voalohany Manerana ny milina fikarohana rehetra
Isan-taona Ny sandan'ny Long-Tail Laharana derivative
fianarana mandanjalanja Organic maharitra Rankings
fikajiana Sarany ankehitriny an'ny laharana voalohany
Efa nanontany tena ve ianao hoe inona ny sanda isan-taona an'ny Google Ranking voalohany amin'ny vanim-potoana mifaninana toa azy Health Insurance? Ahoana $7,471,194 feo? Izany indrindra no vidiny, na izany aza, ny manolotra sy mahazo doka ampy hahazoana ny isan'ny fitsidihana isan-taona (840k amin'ny $ 8.90 isaky ny tsindry). ny Tombana ho an'ny harato dimy taona ankehitriny hamindra io isa io saika $100,000,000. (Tokony hamaky ny whitepaper ianao raha te hahalala ny antony mahatonga izany tombana marina).
Ny SEO-nao dia mety tsy dia mendrika loatra, fa tonga ny fotoana tsy ieritreretanao ny fanatsarana ny motera fikarohana toy ny vola hafa amin'ny marketing ary manomboka manombatombana azy ho fampiasam-bola mety hampiodina ny orinasanao - indrindra amin'ity toekarena ity.
The fampiasam-bola tombanana ho an'ny orinasa iray hahazo ny laharana voalohany amin'ny pejy Health Insurance is 200,000 50,000 $ amin'ny taona voalohany ary XNUMX XNUMX $ isan-taona rehefa avy mitazona ny laharana. Tena tsara izany fiverenana amin'ny fampiasam-bola ary ampahany amin'ny vidin'ny vola horaisin'izy ireo hahazoana izany fifamoivoizana izany amin'ny haino aman-jery nentim-paharazana.
Ampidino ny Whitepaper avy amin'ny Slingshot SEO.
Ny tsiambaratelo farany vaovao Ahoana ny fomba Top 10 Guide
Mametraka doka miaraka amin'ny WildFire
Jul 21, 2010 amin'ny 9: 57 AM
Ny zavatra tiako indrindra amin'ity whitepaper SEO ity dia ny fampitahana mivantana ampiasaina amin'ny fomba hafa azo inoana - Adwords. Izay ahafahanao manatsara ny fanentanana Adwords anao, dia fandaniana mitohy izany. Ity taratasy ity dia manisa ireo dolara varotra teo aloha ary rahoviana ny karama.
Ity taratasy ity dia mampiroborobo ny sandan'ny sisa amin'ny laharam-pahamehana biolojika ambony, na eo aza izany, ny orinasa dia mbola mila mieritreritra amin'ny alàlan'ny sombin-dahatsoratra hafa hatrany sy ny fiantraikan'izany amin'ny vola aloa;
% ny mpandray anjara izay niova fo taorian'ny fisoratanaana
Sarany mandritra ny androm-piainan'io mpanjifa io
Iza ireo teny miaraka amin'ny laharana faha-1 izay hiteraka fivarotana
Andao holazaina fa manana tolo-kevitra miompana amin'ny tanjona kendrena indrindra ianao ary mahatratra 35% ny tahan'ny fiovam-po (mitarika amin'ny varotra) raha vao mahatratra izany pejy izany ny mpampiasa - Ankehitriny dia $ 7.5 tapitrisa ny fanadihadiana ny comp dia $ 2.6 tapitrisa kosa.
Ny zavatra lehibe momba ny Slingshot SEO, ary mpandray anjara amin'ny fitomboany lehibe, dia ny hampiala ny mpanjifany rehefa tsy misy dikany ny fanombanana ny lisitra organika sy ny karama azo.